GNOME 40 inogadzirira zvinhu zvakanakisa, senge touchpad gestures | Linux Vakapindwa muropa
Kana ndikati ndiri fan guru reGNOME, ndinenge ndichireva nhema. Kunyangwe paine zvinhu zvandinoita zvandinoda, mashandiro ayo pamakombuta akasarudzika uye kushomeka kwesarudzo mushure mekuisa kubva pakutanga kunoita kuti ndide, nekure, iyo KDE desktop. Asi ini handigone kuti ndinomuvenga futi, kure nazvo, uye na GNOME 40 zvese zvichavandudza zvakanyanya, nekuda kwemabasa avari kushanda uye isu tave kutoona pane iyo blog blog.
Kunyangwe ini ndanga ndatotarisa pamusoro pe chinyorwa chepamutemo of the nhau dzavari kushandiraNdinofanira kubvuma kuti chakanyanya kundibata yaive vhidhiyo yakatumirwa naFelix Häcker pasocial network Twitter. Iyo inotiratidza nzira yatinogona kudzora zvimwe zvinhu nemasaini pane yekubata pani, chimwe chinhu chakandiyeuchidza nezve zvakafanana basa iro randakatoshandisa mu macOS (iyo OS X panguva iyoyo) makore mashoma apfuura.
1 GNOME 40 iri kuuya munaKurume
2 Nhau dzakakurumbira
GNOME 40 iri kuuya munaKurume
Kutamba neGNOME Shell 40 yekubata padhi?
Vagadziri vemakomba vari kuita basa rinotyisa. Zvinoshamisa!
Usanetseke, iwo chaiwo maratidziro haasi iwo anononoka, ini ndinongofambisa minwe yangu zvishoma nezvishoma pane yangu trackpad. Mifananidzo yacho inoenderana nekufamba chaiko kweminwe yangu. pic.twitter.com/KkLhTpDN0W
- Felix Häcker (@haeckerfelix) January 7, 2021
Kutamba neGNOME Shell 40 touchpad gestures.Vagadziri veShell vari kuita basa risinganzwisisike. Zvinoshamisa! Usanetseke, iwo chaiwo maratidziro haasi iwo anononoka, ini ndinongofambisa minwe yangu zvishoma nezvishoma pane yangu trackpad. Mifananidzo yacho inoenderana nekufamba chaiko kweminwe yangu.
Zvatinoona muvhidhiyo yapfuura chiratidzo chekuti tinokwanisa kuona mawindo ese akavhurwa eapp nekupinda muchigadziro chekushandisa, kunyangwe ini pachangu ndisingazive kuti tichaita sei zviito.
Chiitiko chekutanga chakashandurwa, iine nhau dzakadai sedzatinofarira maficha atinogona kuvhura acharatidzwa. Icho chiitiko chinogamuchirwa kupfuura imwe imba.
Kubata kwepasipad. Dhizaini nyowani inoita kuti zvive nyore kushandisa. Semuenzaniso, kumusoro nekudzika mafambiro anofamba mukati nekunze kwekutarisa muunotanga app. Kuruboshwe uye kurudyi kufamba kunofamba pakati penzvimbo dzebasa. Izvo ini pachangu handisi kuona izvo zvavanotsanangudza ndeyekuti minwe mangani yatinofanirwa kushandisa kuita aya masaini.
Nzvimbo dzekuitira dzakareruka.
Iyo interface yakarongeka.
Custom App Grid: Iye zvino unogona kugadzirisa zvachose gridhi reapps pane zvaunoda, uchishandisa kudhonza uye kudonhedza. Ichi chinhu chavange vachishanda pachiri pasina zvimwe shanduko, asi zvave zvichiramba zvichichinja nekuvandudza iyi kutenderera, uye zvinokodzera chaizvo pamwe nedzimwe shanduko dzese.
Zvikumbiro zvekushandisa mukutarisa kwewindo: Iwindows rinotarisa ikozvino inoratidza icon yekushandisa pahwindo rega rega, kubatsira nekuzivikanwa.
Yakavandudzwa Ekushandisa Mazita: Mutsva maitiro eGNOME 40, kuratidza iro rakazara zita rekushandisa kana uchinge uchikwira pamusoro payo yekutanga.
GNOME 40, inova iyo vhezheni inobudirira GNOME 3.38 uye ichasvetuka muhuwandu kuitira kuti isavhiringidza neGTK 4.0, achaburitswa mukufora.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Desks » GNOME 40 inogadzirira zvinhu zvakanakisa, senge yekubata kwepadesi
Hatichakwanise kushandisa desktop sezvatinoda uye nekuizadza nenzira pfupi
Iwe unofunga iwe unoziva zvirinani kupfuura ivo GNOME vanogadzira zvaunoda kana zvaunoda?
Kune iro danda pamwe nemunyengeri !!
Project Lenix: chimwe chinotsiva kuzadza iyo CentOS isina